Inuyasha ကိုကြည့်ပြီး Yashahime အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ - စပွန်ဆာ
Inuyasha ကိုကြည့်ပြီး Yashahime အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ
ဓာတ်ပုံ။ Hot Topic
၈ Netflix ကသင်ကြိုက်သလောက်စောင့်ကြည့်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ Winx Saga ဟယ်ရီပေါ်တာပြပွဲအသစ်သည် Netflix သို့လာသလား။
Inuyasha Chibi အက္ခရာဖိနပ်
မျက်မှောက်ခေတ်ဂျပန်မှပဒေသရာဇ်toရိယာသို့ပြန်ခုန်ဆင်းခြင်းသည်စနစ်အတွက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ဟာလုံးဝကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိရုံသာမကအချို့သောရှေးရှေးတုန်းက Inuyasha လိုပဲဘိနပ်မပါတဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လေ့ရှိတယ် သင်ကျေးဇူးတင်စရာ, သမျှသောသူတို့နှင့်အတူတက်ထားရန်မလိုပါ။ Inikasha, Sesshomaru, Kikyo, Sango, Kagome, Miroku နှင့် Shippo နှင့်အတူ allover chibi ပုံနှိပ်ထားသောထိုအနီရောင်ဖိနပ်များကိုကောက်ယူပါ။ သင်၏ခြေထောက်ကိုနွေးထွေးစွာထားနိုင်မည့်နေရာရှိပါလိမ့်မည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ တာရှည်ခံဘောင်များဖြင့်သင်သည်၎င်းကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်အပြင်ဘက်သို့ ဦး တည်။ စာပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်အိမ်၌အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Inuyasha ပုံနှိပ်ထိပ်ပေါ်မှာချယ်ရီပဲ။
Hot Topic တွင်တစ်စုံကိုယခုရွေးပါ။
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်ဟိုတယ်ဇာတ်လမ်းတွဲ7အွန်လိုင်းအခမဲ့
ရာသီ (၆) ခုလုံးကိုသင်ဖမ်းမိနေချိန်မှာသင့်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပါ။ Inuyasha: နောက်ဆုံးအက်ဥပဒေ ထွက်မစစ်ဆေးမီ (ရာသီ ၇) နှင့်ရုပ်ရှင် Yashahime ။ အဲဒီမှာတဆင့်ရရန်အများကြီးရှိပါတယ်, သင် Naraku ကိုဂိုဏ်းချယူဂိုဏ်းကိုသင်ကြည့်ရှုအဖြစ်သငျသညျသံသယရေငတ်လိမ့်မယ်။ ဒီရေပုလင်းတွင်ဝက်အူအဖုံး၊ သယ်ဆောင်သည့်လက်ကိုင်နှင့်ကြံ့ခိုင်သောပလတ်စတစ်တို့ဖြင့်လှန်ထိပ်တစ်ခုပါရှိသည်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝက်နတ်ဆိုးကမင်းကိုငုပ်နေရင်းသင့်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုထားနိုင်အောင်တစ်ဖက်မှာ Inuyasha ၏ကြီးမားသောပုံရိပ်နှင့်ထိုးထားသည်။
ယခု Hot Topic မှာတစ်ခုကိုရယူပါ။
Demon Inuyasha ပေါ့ပ်! ဗီနိုင်း
Inuyasha ကိုနတ်မိစ္ဆာဝက်ဟုလူသိများပြီးတစ်ခါတစ်ရံနတ်ဆိုးဘက်သည်ပြိုကွဲသွားသည်။ ဒီ Funko ပေါ့ပ်! ဗီနိုင်းရုပ်ပုံသည် Demon Inuyasha ကိုသူ၏အနီရောင်မျက်လုံးများ၊ ခရမ်းရောင်တံဆိပ်များနှင့်လက်သည်းရှည်များဖြင့်ထမြောက်စေသည်။ ဒါဟာသင်အထူးသဖြင့်ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ် pose အတွက်အစ်ကို Sesshomaru အားမိမိဆင်တူပေးထားသော, သင်ရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ထက်အများကြီးပို menacing ကြည့်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း၏သူရဲကောင်းကဒီမှာအထူးသဖြင့်ကြောက်စရာဖြစ်တယ်, ဒါသူကတစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး ကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနည်းနည်း mutt င်သော်လည်း Inuyasha ဘယ်လောက်ရက်စက်စွာ Inuyasha ၏သတိပေးချက်အဘို့အိမ်ပြန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံတစ်ပုံကိုယူပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ့ပ်ကိုဝယ်ပါ။ Hot Topic မှာ။
Inuyasha ထိုင်နေသောကောင်လေး! Mini ကျောပိုးအိတ်
သင်၏ပစ္စည်းများကိုအားလုံးကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော Inuyasha mini ကျောပိုးအိတ်ထဲသို့ထုပ်ပါ။ ၎င်းသည်နတ်ဆိုးဝက်၏သေးငယ်သောချစ်ပ်များသူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်လဲကျနေသည်။ ၎င်းသည် Kagome ၏ကျော်ကြားသောလက်အောက်ခံစကားစု - Sit boy! ၎င်းတွင်ချိန်ညှိထားသောကြိုးများ၊ ငွေသံတပ်ဆင်ပစ္စည်းများနှင့်ရှေ့ဇစ်အိတ်ကပ်တို့ပါ ၀ င်သဖြင့်သင်မြန်ဆန်စွာရယူရန်လိုအပ်သောအပိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Kagome Higurashi နှင့်မတူပါနှင့်၊ ဤအိတ်ကိုကျော်။ အသာပုတ်ပါ၊
Hot Topic မှာယူပါ။
Inuyasha အဖေ Cap
Inuyasha ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောင်ပြောင်တောက်နေသောဖခင်နီနှင့် Sit ကောင်လေးအားကစားခြင်းဖြင့်ပြပါ။ ရှေ့မျက်နှာအပြင် Inuyasha ဟာ pratfall လုပ်နေတယ်။ ဒါဟာချိန်ညှိနိုင်မှု 100% ဝါဂွမ်းနဲ့လုပ်, အဲဒါကိုလျှက်မှတက်သည်မဟုတ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရသည့်အခါသင်ရက်ပေါင်းပေါ်တွင်သင်၏ဆံပင်ယဉ်လိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ခွေးနားရွက်ကိုဝှက်ထားလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်။
Hot Topic မှာ ဦး ထုပ်ကိုဝယ်ပါ။
ဤစာမူသည်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါ ၀ င်ပြီး၊ ဤစာမျက်နှာရှိလင့်များမှပြုလုပ်သောမည်သည့်ရောင်းချမှု၏ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ဝေသည့်အချိန်နှင့်အညီစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု။
အဲ့ဒီ့မှာ Riverdale ၏ရာသီဥတု ၅ ဖြစ်သွားသည်
Hulu ရဲ့မီးခိုးရောင်ခန္ဓာဗေဒရာသီ 13 ရှိပါဘူး